Abu Mansuur oo isbaray Al-Shabaab iyo ciidamadii soo weeraray oo la kulmay jab xoog leh - Hablaha Media Network
Abu Mansuur oo isbaray Al-Shabaab iyo ciidamadii soo weeraray oo la kulmay jab xoog leh
HMN:-Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa maanta is baray Xarakada Al-Shabaab kadib markii uu u dhigay cashir lama iloobaan ah markii ay Al-Shabaab dhawr jiho kasoo weerartay.
Sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen Caasimadda Online Ciidamada Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa guul weyn ka gaaray dagaalkii maanta ay kusoo qaadeen ciidamo badan oo ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Waxaa jira khasaare soo kala gaaray Labada dhinac sida Goobjoog News ay u sheegeen ilo xog ogaal ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helay dagaalladan waxay sheegayaan in ciidanka Mukhtaar Roobow ay dib usoo riixeen dagaalyahannada Al-shabaab.
Al-shabaab ayaa tiro Seddex jeer ah saakay illaa iyo xilligan weeraray Mukhtaar Roobow, waxaana ay la kulmayaan iska caabin.